Jeff Kupietzky's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Jeff Kupietzky
Kunyengerera Kusaina Email, Vatsigiri Vanofanirwa Kuratidza Kugona kwavo Kwemunhu neContextual Signups.
NeChishanu, Kurume 4, 2022 NeChishanu, Kurume 4, 2022 Jeff Kupietzky
Indasitiri yekushambadzira inoita kunge iri kuenda zvese-mukati nesimba reemail newsletters kubata vateereri uye kutyaira bhizinesi. Chekutanga, Axios yakazivisa kumashure munaGunyana kuti iri kuwedzera kuburitswa kwenhau dzemuno nekuvhurwa kwemapepa masere akanangana neguta. Ikozvino, The Atlantic yakazivisa kuvhurwa kwezvishanu zvitsva zveemail zvinopihwa, mukuwedzera kune anopfuura gumi nemaviri mamwe e-mail akasarudzika ekunyoreswa atove kutenderera. Izvo izvo nevamwe vaparidzi vakawanda vanoziva ndiyo email yakanangwa
Wepamusoro 3 Matekiniki eVaparidzi muna 2021
Chipiri, Kurume 30, 2021 Muvhuro, March 29, 2021 Jeff Kupietzky
Gore rapfuura rave rakaomera vaparidzi. Zvichipa mhirizhonga yeCOVID-19, sarudzo, uye nyonganiso yemagariro, vanhu vazhinji vakadya nhau zhinji uye varaidzo pamusoro pegore rapfuura kupfuura nakare kose. Asi kusahadzika kwavo kwenzvimbo dzinopa ruzivo irworwo kwasvika pakakwirira-nguva, sezvo kuwedzera kwemashoko asiri iwo kwakasunda kuvimba mumasocial media uye kunyange injini dzekutsvaga kurekodha zvakaderera. Dambudziko rine vaparidzi pamhando dzese dzemukati dzichinetseka
Sevashambadziri, tinoziva kuti kuendesa vateereri chaivo nemeseji chaiyo pamusoro pekodhi chaiyo kwakakosha, asi zvakare kwakaomesesa. Nenzira dzakawanda uye mapuratifomu - kubva pasocial media kusvika kuchinyakare nhepfenyuro - zvakaoma kuti uzive kwekudyara kwako. Uye, hongu, nguva inguva yekugumira - panogara paine zvimwe zvekuita (kana izvo zvaungave uchiita), pane pane nguva nevashandi kuzviita. Dhijitari vaparidzi vari kunzwa iko kumanikidzwa
3 Matanho eStrong Dhijitari Isu kune Vaparidzi iyo Dhiraivha Kubatanidzwa & Revenue
Chitatu, Nyamavhuvhu 26, 2020 Chitatu, Nyamavhuvhu 26, 2020 Jeff Kupietzky
Sevatengi zvave vachifambira vachiwedzera kune epamhepo nhau kushandiswa uye vane zvakawanda zvakawanda sarudzo dziripo, vapurinda vaparidzi vakaona yavo yemari plummet. Uye kune vazhinji, zvave zvakaoma kuchinjira kudhijitari zano inoshanda chaizvo. Paywalls anga achinyanya kuve njodzi, kutyaira vanyoreri kure kune kuwanda kwemahara zvemukati. Ratidza kushambadza uye zvemukati zvakatsigirwa zvakabatsira, asi zvirongwa zvakatengeswa zvakatwasuka zvinoda vashandi zvakanyanya uye zvinodhura, zvichivaita kuti vasasvikike zvachose